Star Vega: astaamaha, quraafaadka, goobta iyo exoplanets | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 31/05/2021 09:27 | Astronomy
Waxaynu ognahay in koonku ka kooban yahay balaayiin xiddigood oo loo soo ururiyo xiddigo. Mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan waa xiddig Vega. Waa xiddig ku taal xiddigta Lyre waana xiddigga shanaad ee ugu ifaya cirka habeenkii oo dhan. Haddii aan ku jirno qaybta cirifka woqooyi ee cirifka, taas oo ah tan labaad ee ugu dhalaalaysa Arthur. Waxay ku taal oo keliya meel fog oo ah 25 sano oo iftiin ah meeraheenna waana mid ka mid ah xiddigaha ugu iftiinka badan ee u dhow nidaamka qoraxda.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato xidigta Vega iyo astaamaheeda.
2 Cilmiga xiddigta Vega
3 Xiddiga Vega iyo exoplanets
Vega waa xiddig loo tixgeliyo eber midab ahaan iyo cabbir ahaan muuqaal ahaan. Ka dib markii laga jaro qiimayaasha miirayaasha buluuga iyo cagaarka ah, tusmada midabka BV waa eber. Laga soo bilaabo dhulka, eber sidoo kale waa cabirkiisa muuqda. Iyada oo ay ugu wacan tahay xawaareheeda wareegga sare, marka lagu daro farqiga weyn ee heerkulka dusha sare, waxay sidoo kale la kulantay fiditaan aan caadi ahayn, diiwaangelinta heerkulka dusha sare ee dhulbaraha iyo ulaha labadaba. Mid ka mid ah tiirarka xiddiggu wuxuu u jeedaa dhinaca Dunida.
Muuqaal kale oo ka mid ah xiddiga Vega ayaa ah saxarada boodhka leh ee ku wareegsan xiddiga. Balaayiin sano ka hor, qorraxda ayaa sidan loogu wareegi lahaa. Qalabka hadda ee Vega ayaa laga yaabaa inuu asal ahaan ka soo jeedo nidaamyada meeraha ee mustaqbalka la mid ah kuweenna. Xitaa waa suurtagal in maanta aad leedahay wax ka badan hal meeraha nooca Jovian ama Neptunian. Qalabka boodhka ee agagaarka Vega waxaa ka mid ah qashin ka yimid shilalka hore ee u dhexeeya asteriyooyinka. Sidoo kale way awoodaan noqo walxaha yar yar ee isweydaarsiga ee kala taga oo sameeya qaabab u eg suunkeena Kuiper.
Vega waa xiddigta ugu ifka dheer kooxda xiddigta Lyra xagaaga waqooyiga. Habeenada xagaaga ee Waqooyiga Hemisphere, badanaa waxaa lagu arki karaa meel u dhow jihada bartamaha woqooyi. Laga soo bilaabo loolka ilaa koonfurta, waxaa lagu arki karaa jihada woqooyi inta lagu jiro xilliga qaboobaha koonfurta cirka. Baaxadda dhulku waa + 38,78 °. Xiddigga Vega waxaa lagu arki karaa oo keliya latitude woqooyi 51 ° S, sidaa darteed Vega laguma arki karo Antarctica ama qeybta koonfureed ee Koofurta Ameerika. Meel fog oo ah + 51 ° N, Vega waxay ka sii socotaa dusha sare xiddig wareega ah.
Cilmiga xiddigta Vega
Caddooyinka Giriigga ee qadiimiga ah, xiddigani waa garabka madxafka ay hindisay Hermes oo la siiyay Apollo si uu ugu magdhabo xatooyada. Apollo wuxuu siiyay Orpheus iyo, markii uu dhintay, Zeus wuxuu u rogay kataaraddii xiddigle. Vega waxay meteleysaa gacanta kataaradda.
Murtida Shiinaha, waxaa ku jirta sheeko jacayl oo ku saabsan Qi Xi, taas oo Niu Lang (Altair) iyo labadiisa wiil (β iyo γ Aquila) ay kala sooceen hooyadood, Zhinu (Vega), oo ku nool wabiga dhiniciisa kale . , habka caanaha. Si kastaba ha noqotee, sannad kasta maalinta toddobaad ee toddoba iyo tobnaad ee kalandarka dayaxa Shiinaha, waxaa jiri doona buundo, sidaa darteed Niu Lang iyo Zhi Nu dib ayey isugu soo laaban karaan waqti aan dheereyn.
Magaca Wega (oo markii dambe Vega ahaa) wuxuu ka yimid tarjumaadda ereyga Carabiga ah ee wāqi, oo macnaheedu yahay "dhicitaan" ama "soo degitaan."
Xiddiga Vega iyo exoplanets
In kasta oo tan ay is beddeli karto goor dhow. Koox cilmi baarayaal ah ayaa ku tiirsanaa sanado indha indheyn si ay u falanqeeyaan deegaanka xidigta. Haddii natiijooyinkani sax yihiin, exoplanets-ka ay Vega ku yeelan karto wareeggiisa ayaa noqon doona mid xad-dhaaf ah. Aad ayey ugu dhowdahay xiddigta oo waxay qaadataa in ka yar laba maalmood iyo badh Dunida si loo dhammaystiro wareegga oo buuxa. Tusaale ahaan, meeraha meeraha ugu dhow cadceedda waxay qaadataa 88 maalmood in lagu dhammaystiro hal wareeg. Heerkulkaagu wuxuu noqon doonaa qodobka kale ee ba'an.
Celcelis ahaan heerkulka dusha sare waa qiyaastii 2976 digrii. Tani waxay noqon doontaa exoplanet-kii labaad ee ugu kululaa ee abid la arko. Cilmi-baaristu sidoo kale waxay kaa caawin kartaa go'aaminta haddii xiddigga Vega laga yaabo inuu leeyahay aalado kale oo u dhow. Ka dib oo dhan, sida ay cilmi-baarayaashu yiraahdeen, waxaan la macaamileynaa nidaam aad uga ballaadhan nidaamka qorraxda. Sidaa darteed, kama diidi karaan inay jiraan meerayaal kale oo ku xeeran xiddigta. Xaaladdan oo kale, su'aasha kaliya ayaa ah inay leeyihiin awood ay ku ogaan karaan.
Xilligan, in ka badan 4000 exoplanets ayaa la helay. Si kastaba ha noqotee, dhammaan adduunyada ka baxsan nidaamka qorraxda, in yar ayaa run ahaantii soo jiidasho leh. In yar ayaa laga helaa hareeraha xiddigaha u ifaya ama ugu dhow Dunida sida Vega. Sidaa darteed, haddii ay jirto meere ku wareegsan xiddigta, waxaa lagu baran karaa si faahfaahsan. Soo helitaanka sheybaarka agagaarka Vega wuxuu noqon doonaa war aad u wanaagsan, iyadoon loo eegin inay tahay adduun aan xitaa laga fogaan karin.
Baarayaasha waxay heleen calaamado tilmaamaya jiritaanka exoplanets. Xiddiga Vega waxaa laga yaabaa inuu leeyahay Jupiter kulul. Si kale haddii loo dhigo, meere aad u weyn, oo la mid ah Jupiter, ayaa ku meeraysanaysa xiddig aad ugu dhow. Si kastaba ha noqotee, ka dhowaanshaha xiddigta Jupiter waa qorraxda, waxay noqon laheyd meere aad u kulul. Waxay kaloo noqon kartaa Neptune kulul. Qaabku waa isku mid, laakiin adeegsiga meeraha oo leh cufnaan la mid ah Neptune, Jupiter. Ugu yaraan, sida ay sheegeen cilmi-baarayaasha, haddii exoplanet-kan uu jiro, waxay lahaan doontaa tiro la mid ah tan Neptune.
Aragtiyaha waxaa ku jira xag-jir kale oo la sheegay inuu yahay meere dhagax ah. Taasi waa, waxaan ognahay in meeraha Jupiter uu yahay mid wasakhaysan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, in kasta oo meeraha xiddiggeedu uu ahaa mid dabcan, oo ka fog aagga lagu noolaan karo, sidaa darteed nalama soo wajahayno exoplanet xiiso leh oo loogu talagalay raadinta nolosha ka baxsan. Inaad aad ugu dhowdahay xiddigga Vega, Exoplanet-kan ayaa baranaya sida loo buuxiyo sida haddii ay tahay buufin. Taasi waxay noqon lahayd heer kulkeeda oo xitaa birtu ku dhalaali karto jawigeeda.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto xidigta Vega, astaamaheeda iyo hareeraheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Xiddig Vega